Taliyaha Booliska Nugaal oo shaqadiisii dib loogu fasaxay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Taliyaha Ciidanka Booliska Puntland Jeneraal Muxiyaddiin Axmed Muuse ayaa Shaqadoodii dib ugu fasaxay Taliyaha qeybta Booliska Gobolka Nugaal iyo ku xigeenkiisa oo uu dhawaan Shaqada ka joojiyey.
Sarreeye/Gaas Muxiyadiin Axmed Muuse, ayaa shaqa-joojinta u cuskaday amar-diiddo uu sheegay in uu sameeyay Col. Muumin Cabdi Shire, balse ilo ka agdhow Jananka ayaa xaqiijiyay in labada Taliye uu khilaaf hoose ka dhex jiray.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa Magaalada Garoowe laga dareemay khilaafka u dhaxeeya Taliska Booliska Puntland iyo Taliyaha qeybta Booliska Gobolka Nugaal iyo ku xigeenkiisa,taas oo keentay inay soo dhex-galaan madaxda sare ee Puntland.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan ayaa shaqada u fasaxay Cabdixamiid Dirir oo ahaa Taliyaha Booliska Gobolka Nugaal saddex saacadood kadib markii uu shaqada ka joojiyay Gen Muxiyadiin
Weerar askar lagu dilay oo ka dhacay Magaalada Boosaaso